ဘယ်အချိန်မှာခွေးပေါက်စကိုက်ရပ်တန့်သလဲ? | Dogs World
ထိုအချိန်အတောအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကြိမ်ထက်မကတွေးမိသည်မှာသေချာပါသည် အဆိုပါခွေးပေါက်စကိုက်ရပ်တန့်သောအခါ။ ကောင်းပြီဒါဆိုအဖြေကိုသိရအောင်
ခွေးပေါက်စတွေအားလုံးကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုဖြင့်ကိုက်ကြတယ်။ တစ်ခုကတော့အဓိကတစ်ခုဖြစ်သည် သွားကြီးထွားမှု။ ဘ ၀ ၏ပထမလများအတွင်းအမြဲတမ်းပေါ်လာသည့်အခါကလေး၏သွားများသည်ပြုတ်လိမ့်မည်။ ဒီအပြောင်းအလဲကသူသွားကိုက်တာကိုအဆင်မပြေစေဘူး။
အခြားအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် စူးစမ်းဖို့သင့်ပါးစပ်ကိုအသုံးပြုပါ သူတို့ကိုဝန်းရံသောအရာကို။ သင်၏ထိတွေ့မှုခံစားချက်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လေးလကြာပြီးနောက်ကလေးငယ်သည်သွားမသွားတော့ဘဲအမြဲတမ်းသွားပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါကဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် သုံးလမှလေးလအထိကြာနိုင်သည် ပီးဆုံးရနျ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်အနေဖြင့်အဆင်မပြေမှုကိုသက်သာစေမည့်ဝါးကစားစရာများကိုပေးရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုမကိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သူ့ကိုသင်ရမည်.
သူသည်ယခုခွေးကလေးဖြစ်သော်လည်းမနက်ဖြန်ကိုက်သောအကျင့်ကိုမချိုးပါကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာထိခိုက်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အရမ်းလွယ်တယ် ဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါတိုင်းရပ်တန့်။ သူကိုက်လိုက်ရင်ကစားတော့မယ်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကစားချင်တယ်ဆိုတာသူတဖြည်းဖြည်းသိလာမှာပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်တာကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။
လည်း, ကျနော်တို့ခွေးသွေးဆောင်ရန်ရှိသည်ဘူး။ သင်၏လက်များကိုလှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းအားဖြင့်ကစားခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာတိရစ္ဆာန်သည်ဂိမ်း၏ရှေ့မှောက်၌ရန်လိုသောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ဘယ်အချိန်မှာခွေးပေါက်စကိုက်ရပ်တန့်သလဲ?